Oogada oo dhajinta hoos u dhig Factory, Warshadleyda - Shiinaha oogada oogada dusha sare soo saare shaabadda
Khatimidii albaabka dabka
Daboolka adag ee adag
Dab adag & shaabad qiiqa
Dab & shaabad acoustic
Shaabad gaar ah
Dabka lagu qiimeeyo hoos u dhig shaabadda
Xirmada xirmooyinka dabka & suunka suunka
Nidaamka shaabad dhalaalka
Khatimidii Sigaarka Qiiqa
Hoos u dhig shaabadda
Dusha sare ee dhajinta hoos u dhig shaabadda
Qarsoon hoos u dhig shaabadda
Hoos u dhig shaabadda albaabka muraayada
Hoos u dhig shaabadda albaabka sibidhka ah
Hoos u dhig Qiimaynta Khasnadda
Ku shub shaabadda dhalada ...
Hoos u dhig shaabad siibada ...
Dabka lagu qiimeeyay hoos u dhig shaabad G ...
Qarsoodi hoos u dhig shaabad GF ...
Dusha sare ee dhajinta hoos u dhig shaabadda GF-B12
GF-B12 Shandadda hoos-u-dhajinta ee banaanka ku xiran ayaa ku habboon mashaariicda dib-u-hagaajinta kadib. Haddii albaabka lagu rakibay meeshiisa, waxay u baahan tahay in lagu daro dahaadhka codka, kuleylka kuleylka, ka hortagga boodhka iyo shaqooyin kale. Way fududahay oo ku habboon tahay in lagu rakibo dusha sare ee albaabka; muuqaalku waa qurux badan yahay. • Dhererka ： 380mm-1500mm • Farqiga isku xidhka ： 3mm-15mm • Dhameystir silver Lacag Anodized ah • Dayactir ： RREMTE aluminiumka daboolka qurxinta leh, ku rakib boolal, ka dibna dabool • Plun ...
Dusha sare ee dhajinta hoos u dhig shaabadda GF-B01
GF-B01 Dusha sare ee hoos-u-dhigga shaabadda ayaa ku habboon mashaariicda dib-u-hagaajinta kadib. Haddii albaabka lagu rakibay meeshiisa, waxay u baahan tahay in lagu daro dahaadhka codka, kuleylka kuleylka, ka hortagga boodhka iyo shaqooyin kale. Way fududahay oo ku habboon tahay in lagu rakibo dusha sare ee albaabka; booska rakibida qaybaha adag ee badeecada waxaa lagu daboolay xargaha qurxinta, oo ah mid fidsan oo qurux badan. • Dhererka ： 380mm-1500mm • Farqiga isku xidhka ： 3mm-15mm • Dhammaystir silver Lacag Anodized / naxaas / dahab ah ...
Dusha sare ee dhajinta hoos u dhig shaabadda GF-H1001
GF-H1001 Waa shaashad si otomaatig ah loo habeyn karo oo keydin karta tamarta. Wax soo saarku wuxuu ka kooban yahay aaladda hagaajinta laastikada iyo burush. Burushka si otomaatig ah ayaa loo hagaajin karaa iyadoo loo eegayo dhererka dhulka si uu ula qabsado dhulka si loo gaaro saameynta ugu wanaagsan ee wax lagu xiro iyo in la yareeyo xirashada burushka. • Dhererka ： 440mm-1500mm • Farqiga isku xidhka ： 1mm-5mm • Dhameystir coating Dahaarka cad • Jiidida
Dusha sare ee dhajinta hoos u dhig shaabadda GF-B092-1
GF-B092-1 Si loo badbaadiyo shaqada jeexitaanka ee hoosta albaabka, B092-1 dalabka dheereynta hoos u dhigga ayaa si gaar ah loo qaabeeyey. Kaliya ku soo gaabi dhererka albaabka 34 ~ 35mm markaad naqshadeynayso, oo toos u hagaaji qaybta hoose ee albaabka otomaatiga ah si toos ah labada baal ee leh boolal. Shaqadeedu waxay la mid tahay GF-B092, xarigga xarkaha ayaa si otomaatig ah kor ugu kacaya, xarigga caagkuna wax khilaaf ah kuma leh dhulka. • Dhererka ： 330mm ~ 1500mm ， • Tilmaamaha guud ee guud ： 510mm ， 610mm ， 710mm ...
Dusha sare ee dhajinta hoos u dhig shaabadda GF-B03-1
GF-B03-1 Si loo badbaadiyo shaqada jeexitaanka ee hoosta albaabka, B03 dalabka dheereynta hoos u dhigga ayaa si gaar ah loo qaabeeyey. Kaliya ku soo gaabi dhererka albaabka 34 ~ 35mm markaad naqshadeynayso, oo toos u hagaaji qaybta hoose ee albaabka otomaatiga ah si toos ah labada baal ee leh boolal. Shaqadeedu waxay la mid tahay B03, xarigga xarkaha ayaa si otomaatig ah kor ugu kacaya, xarigga caagkuna wax khilaaf ah kuma leh dhulka. • Dhererka ： 330mm ~ 1500mm ， • Tilmaamaha guud ee guud ： 510mm ， 610mm ， 710mm ， 810mm ...
Dusha sare ee dhajinta hoos u dhig shaabadda GF-B042
GF-B042 Loogu talagalay albaabbada culus, waxay noqon kartaa qayb-dhex-dhexaad ama dibedda lagu rakibay. Buro isku hagaajinaya waxay ku yaalliin midigta ama bidixda. Waa la qabsan karaa si loo furo albaabada midig ama bidix. Waxaa badanaa loo isticmaalaa albaabbada u baahan daboolka dhawaaqa sare ee shirkadaha warshadaha iyo macdanta. Wixii rakibo ah nus-ku-rakib ah, ku dheji dherer dhan 44mm xagga hoose ee albaabka, ku dheji badeecada meeshiisa, oo ku hagaaji baalasha leh boolal. • Dhererka ： 450mm-2300mm • Farqiga dhajinta ： 3mm-15mm。 Fini ...
Wadada Longtan, Degmada Jiujiang, Wuhu, Anhui, Shiinaha 241000